Umbala wePublic Republic Party - Kutheni Ubomvu
Kutheni Umbala Obomvu Uhlanganiswe namaRiphabhlikhi
Indlela imibala eyaye yabelwa ngayo kumaPolitiki aseMerika
Umbala odibene nePublic Republic Party ubomvu, nangona kungengenxa yokuba iqela likhethile. Ubambiswano phakathi kwebomvu neRiphabhliki luqala ngokuza kweendaba zomnxeba kunye neenethwekhi kwiNyulo yoLuntu kwiminyaka emininzi edlulileyo kwaye ihlangene ne-GOP ukususela apho.
Uvile imiqathango ebomvu, umzekelo. Umbuso obomvu ungowamavoti aseRiphabhlikhi ukhetho lwerhuluneli nomongameli.
Ngakolunye uhlangothi, urhulumente ohlaza okwesibhakabhaka ngowokuthi uthembeke kunye namaDemokhrasi kuloo mihlanga. I-Swing ithi ibali elihlukileyo kwaye lingachazwa njenge-pink okanye imfusa ngokuxhomekeke ekuxhaseni kwezopolitiko.
Ngoko kutheni umbala obomvu unxulumene namaRiphabhliki?
Ukusetyenziswa kokuqala koBomvu kwiRiphabhliki
Ukusetyenziswa kokuqala kwemimiselo ebomvu ukuxhuma umbuso waseRephabliki waba malunga neveki ngaphambi koonyulo lukazwelonke luka-2000 phakathi kweRepublican George W. Bush kunye noMdemokhrasi i-Al Gore, ngokwe -Washington Post kaPaul Farhi.
I- Post ikhangele ipapasho kunye neendaba zemagazini kunye neendaba zethelevishini ezazisasazwa ezibhalwe ngo-1980 ngenqaku kwaye zifumanise ukuba iziganeko zokuqala zilandelelwa i-NBC namhlanje zibonisa kunye iingxoxo ezilandelayo phakathi kukaMat Lauer noTim Russert ngexesha lexesha lokhetho kwi-MSNBC.
"Njengoko unyulo luka-2000 lwaba ngumhla wama-36 wokuhlaziya i- debacle , i-commentariat yabhala ngokuvumelana nemibono efanelekileyo. Amaphephancwadi aqala ukuxoxa ngolu hlobo kumbindi omkhulu, ongenakubhala obomvu kunye nohlaza okwesibhakabhaka. iveki emva kokuvota ukuba i-compromise ingenza umongameli waseGeorge W. Bush welizwe elibomvu kunye ne-Al Gore intloko ye-blue. '"
Akukho Mvumelwano malunga nemibala phambi ko-2000
Ngaphambi komongameli we-2000 ukhetho, amanethiwekhi omabonwakude ayengenamathele kunoma imuphi umxholo xa kubonisa ukuba ngabaviwa bani nawaphi amaqela anqobileyo. Enyanisweni, abaninzi bajikeleza imibala: Ngomnye iRiphabhlikhi yayiza kubomvu kwaye kunyaka ozayo iiRiphabhlikhi ziza kubomvu.
Akukho nhlobo inqwenela ukufuna ibomvu njengombala wayo ngenxa yokudibanisa kunye nobuthetho.
Ngokutsho komagazini waseSmithsonian :
"Ngaphambi kokhetho lwama-2000, kwakungekho ukulingana kwiimephu ukuba iziteshi zethelevishini, amaphephandaba okanye amaphephancwadi asetshenziselwa ukubonisa ukhetho lonyulo lukazwelonke. umjikelo wonyulo. "
Amaphephandaba kuquka i -New York Times kunye ne- USA Today ivakalisa kwi-theme yeRiphabliki-ebomvu kunye ne-Democrat-bluhlaza kulo nyaka, kwakhona, kwaye inamathela kuyo. Zomibini zipapashwe ngamaphupha ekhompyutheni eneempawu zeziphumo. Amagqabantshi ahlala kunye noButy abonakala abomvu kumaphephandaba. Amagqeba avotelwe i Gore ayefakwe emthunjini.
Inkcazo ye-Archie Tse, umhleli omkhulu wemifanekiso yexesha , eyanikezela i- Smithsonian ngokukhetha kwayo imibala kwiqela ngalinye lilingane ngqo:
"Ndandigqiba isigqibo esilubomvu siqala 'r,' iRiphablikhi iqala ngo-r. Kwakuyintlangano engokwemvelo. Kwakungekho ncoko enkulu malunga nayo. "
Kutheni amaRiphabhlikhi ahlala kuLuhlu oluBomvu
Umbala obomvu unamathele kwaye ngoku unxulumene ngokusisigxina neRiphabhlikhi. Ukususela kukhetho lonyulo luka-2000, umzekelo, i- RedState yewebhu iye yaba ngumthombo owaziwayo weendaba kunye nolwazi lwabafundi abanamalungelo.
I-RedState ichaza ngokwayo ngokuthi "ibhulogi yeendaba zezopolitiko ezifanelekileyo kwizentsimbi zamalungelo."
Umbala okwesibhakabhaka ngoku unxulumene ngokusisigxina kunye namaDemokhrasi. I-website ye-ActBlue, umzekelo, inceda ukudibanisa abaxhasi bezopolitiko kubaviwa beDemokhethi abazikhethele zona kwaye ibe yindlela enamandla ngayo ngayo iikhankaso.
Ephantsi kakhulu ukuya kwiNgxowa-mali yeMali yeNgeniso yeMali
North Korea kunye neNuclear Weapons
Impembelelo yeCoattail kwizopolitiki
Indlela yokufumana iKhadi loKhuseleko loLuntu
Iimiphumo zeSatifikethi seMatriki kwiNkqubo yeCongress Works
Ngaba Unokuba Ucebile Ukuba ngu Mongameli?
Ibhili yeFama ikhuthaza ii-Microloans zoLimo lwezilwanyana
Ngaba ngabaMongameli kunye nabaPhini boMongameli bachongwa
Iinkcukacha ezibalulekileyo malunga neMfazwe kwiDrugs
Amazwe apho ukubhema iMarijuana kusemthethweni
I-Plesiosaurs kunye neePliosaurs - I-Serpents yoLwandle
Ubomi beJose de San Martin
Iintetho ezili-10 eziphezulu ezineeNqanaba eliphezulu zokuKhupha isisu
I-Crystal Projects Igalari yezithombe
Indlela yokudibanisa "Umxhasi" (ukusula)
Amanqaku NgamaPhepha aPoshook, Ubukhulu, kunye neeGauges
Abaphumeleleyo kwi-ANA Inspiration Tournament ye-LPGA
Umbala Wesikhumba Uguquka Njani?
I-verb Mood emva kweeNkcazo ze-Es
Ukuxuba amaVocal kwiiNkqubo zePro
5 Ama-Heroines angenagqithisileyo avela kwiLatural Literature
Ukuloba i-Giant Humboldt Squid
Yintoni Enokwenza Omnye Umlobi "Olungileyo"?
Yintoni uShomere uNegeya?
Umthetho wokuCamngca - Indlela yokuCamngca esebenza ngayo kwiFizikiki
Ivesi zeBhayibhile kwiNqulo
Intshayelelo yeentlobo zeFungi
Indima ebalulekileyo ye-US Thirty Parties
Imfazwe yaseFransi neyamaNdiya: Izizathu
Iinqununu Ezinhlanu Ezilungelelaniso Zokuqala Zenkulungwane Ye-19
Iprofayile yeGene Sarazen Career
I-Reaction Quotient Definition (iKhemistry)